Cali Mahdi oo qirtay inuu Xaday Xoolo Dadweyne & Arrin culus uu la soo deristay | Somalia News
Cali Mahdi oo qirtay inuu Xaday Xoolo Dadweyne & Arrin culus uu la soo deristay
Madaxweynihii hore ee dowladdii KMG aheyd ee Soomaaliya, Mudane Cali Mahdi Maxamed oo bixiyey wareysi dhif iyo naadir ah ayaa wuxuu kaga hadlay waayihiisa nololeed iyo arrimo kale oo xasaasi ah.
Cali Mahdi oo u warramay TV-ga Soomaali Cable ayaa soo hadal qaaday dhacdooyin kala duwan oo uu la kulmay, sida dagaalkii uu lagalay General Maxamed Faarax Caydiid.
Ugu horreyn waxaa la weydiyey su’aal la xiriirta, haddii uu weligiis sameeyey xatooyo xool dadweyne, intii uu madaxweynaha ahaa iyo ka horba.
Madaxweyne Cali Mahdi ayaa qirtay inuu sameeyey xatooyo, wuxuuna sheegay in isaga oo dhalinyaro ah 1968-dii uu xaday lacag gaareyso 25 kun oo Shilin Soomaali ah, islamarkaana uu ku dhistay guri uu ku lahaa xaafadda Siigaale ee degmada Hodan.
“Xoolo dadweyne anigu waa xaday anoo yar oo dhalinyaraa oo 20 jir ah ayaa waxaan xaday 25 kun oo shilin Soomaali ah 1968-dii waaye, waxaana ku dhistay guri Siigaale ku yaallay oo aan daganaay, 3000 dhul ayaan kala baxay 3000 Injineerka ayaan siiyey inta kalena alaab ayaan ku gatay.” ayuu yiri Madaxweynihii hore ee Soomaaliya.
Cali Mahdi Maxamed ayaa sidoo kale intaasi ku daray in markii uu dib u bartay Diinta uu Sadaqeeyey gurigaasi.
“Diinta marka aan dib u bartay waxaan ogaaday inaan qatar ku jiro oon guriga aan daganahay xalaal ii aheyn, waxaa ku cunaayana ay xalaal aheyn waxa igu dhashayna uu Ilaahey ogyahay xaaladooda, gurigii waa Sadaqeeyey.” ayuu markale yiri.
Sidoo kale wuxuu intaasi sii raaciyey “Muddo ka bacdi, hadana waa fakiray waxaan iri Sadaqo waxa aad adigu leedahay ayaad Sadaqeysataa see adiga deyn laguugu lahaa u Sadqeynee?. waan baxay bangiga dhexe ayaa tegay waa xilliga Xasan Sheekh Maxamuud, Bashiir Ciise ayaan u tegay guddoomiyihii Bangiga Dhexe waxaan ku iri Bashiirow 1968-dii Dollarku meeqow ahaay wuxuu ahaay ayuu yiri lix shilin 18 sinti, 25 kun iigu qeybi, waxay noqotay 4045 Dollar, kadib Xasan Sheekh ayaan u tegay waxaan iri lacag ayaa la’iigu leeyahay dowladaa lacag igu leh ii sheeg sidaan yeelaayo ma’adaan kuu keenaa mise meel ayaad ii sheegeysaa oo aan geynaa bangiga dhexe ku shub ayuu yiri, waana geeyey.”
Ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay inuu ka qoomameeyo labo arrin oo dhacday waayihiisii, gaar ahaan intii uu dalka ka ahaa madaxweynaha.
Cali Mahdi ayaa tilmaamay in labadaas qodob ay yihiin go’aankii ku dhaawaqay Ra’iisul wasaarihiisii Cumar Carte Qaalib ee uu ku kala diray ciidamada Qaranka iyo dagaalkii uu la galay Ceydiid ee markii dambe isku bedalay dagaal u dhexeeya Habar-gidir iyo Abgaal.
Previous articleNin Gabar uu shukaansanayey Dilay Magaalo Katirsan Soomaliland
Next articleXirsi “Madaxweynuhu maaha in u cabasho iyo calaacal fagaarayaasha la imaado ee isaga ayaa ayaa laga raba